Musiyano uripo pakati pekupera zuva uye zvakanakisa pasati pasvika | Bezzia
Maria vazquez | 07/09/2021 12:00 | Cooking
Kune zvimiro zvinoshamisa. Munhu anorasa avhareji yemakirogiramu zana nemakumi masere ezvokudya pagore nekuda kwekusaziva iyo pasherufu hupenyu hwechikafu, Wanga uchizviziva here? Vamwe vanhu, pavanovhura firiji vowana yogati yapera, vanobva vairasa nekufunga kuti hazvina njodzi kudya. Asi ndizvo chaizvo here?
Kusaziva kunokanganisa kuvepo kweakakura chikafu chekudya izvo zvinogona kudzivirirwa. A magariro, hupfumi uye dambudziko rezvakatipoteredza iyo yakasimudzira kushandiswa kweinosarudzika zuva rekushandisa mukutsiva zuva rekupera mune zvimwe zvekudya. Asi ndeupi musiyano?
Tine chokwadi chekuti iwe unoziva ese maviri mazwi, kuti iwe wajaira kuvatsvaga mune zvigadzirwa izvo zvaunozadza yako yekutengera ngoro, asi iwe uri kujekesa pamusiyano uripakati pematemu maviri aya? Iwe unoziva iyo njodzi kana hapana njodzi inobatanidzwa mukusaremekedza mazuva aya? KuBezzia tinoedza kubvisa kusahadzika kwako kwese nhasi.
1 Kupera Zuva
2 Zvakanakisisa pamberi pezuva
Nguva yekupera ndeye zuva iro chikafu chinoonekwa sechisina kuchengeteka. Zuva iri rinoshanda kuchikafu chine microbiologically chinoparara uye nekudaro chinogona kuisa njodzi kuhutano hwevanhu mushure menguva pfupi.
Zvese zvigadzirwa zvine microbiological njodzi vanofanirwa kutakura zuva rekupera. Izvi zvinoratidzwa se "zuva rekupera" pane yega yega yakarongedzwa chikamu uye inofambisirwa pamwe nezuva chairo (zuva, mwedzi uye gore), kana nereferenzi kunzvimbo inoratidzwa zuva racho.
Kubva panguva yekupera kushanda zvinonzwisiswa, saka, izvo chikafu chinofanira kubviswa kana kuraswa kudzivisa zvinogona kuitika chepfu yekudya. Ko kana chikafu chikaita sechakanaka? Kunyangwe ichiratidzika kunge yakanaka, microbiologically inogona kuva nenjodzi kuhutano, uye hatizokwanisi kuiongorora zvinehunyanzvi.
Zvakanakisisa pamberi pezuva
Zuva rakasarudzika rekudya rinoratidza iwo musi unozogadzirwa nechigadzirwa. Kana zuva iri rapfuura, chikafu chinogona kurasikirwa nezvimwe organoleptic zvimiro senge hwema, hwema kana magadzirirwo, asi zvicharamba zvakachengeteka kumutengi chero bedzi mamiriro ekuchengetedza achiremekedzwa.
Chinyorwa "chakanakisa kusati kwapera ..." kana "chakanakisa pamberi ..." saka chinoratidza kusununguka kukuru pane "zuva rekupera". Zvigadzirwa izvo zvakapasa zvakanakisa pasati pasati padyiwa ipapo? Kurudziro yeSpanish Agency yeChikafu Kuchengetedza uye Nutrition inokurudzira usati wavadya cheki kutanga kuti mudziyo wechikafu hauna kumira wobva watarisa kuti chikafu chinoratidzika zvakanaka here, chinonhuwirira uye chinonaka. Kana zvirizvo, saka inogona kupedzwa zvakachengeteka.
Izvo zvigadzirwa zvichiri kutengeswa mushure meakanakisa pasati pasvika zuva? Kwete. Iyo yakasarudzika zuva rekushandisa rinogumira iyo nguva iyo icho chigadzirwa chiri kutengeswa, saka zvazviri yakabviswa kubva panzvimbo yekutengesa.
Izvo zvataurwa pamusoro chete zvine kupisa kana mamiriro ekuchengetedza uye kushandiswa kwechikafu akaremekedzwa, pamwe nemugumo zuva rekushandisa kana mudziyo wavhurwa. Kuremekedza aya mamiriro anogara achiratidzwa pachigadzirwa kwakakosha kuti uve nechokwadi chekuchengetedza kwechimwe chikafu. Muchiitiko chekusaita kudaro, uye zvisinei nemusi wayo wekupera kana wekusarudza kushandiswa, chikafu chiri kutaurwa chinogona kuve nemhedzisiro yakaipa pahutano hwako.
Haisi ese zvigadzirwa zvinofanirwa kutakura zvinoratidza nezve yavo yavanofarira kunwa kana yavo yekupera zuva. Pakati pavo tinowana zvigadzirwa zvinodyiwa zvakarongerwa kwenguva pfupi uye kuora kudiki kuri pachena, sezvazviri chiitiko chemichero, uye zvigadzirwa zvine hwakareba hwakareba hwakareba hunhu hunofarira kuchengetedza kwavo, senge vhiniga. Zvinwiwa zvinwiwa zvinodhaka, bhekari uye zvigadzirwa zvemakeke, michero nemiriwo ndiwo mamwe emapoka ezvikafu zvakanyanya muchikamu ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Cooking » Musiyano uripo pakati pekupera zuva uye zvakanakisa pasati pari